"गर्जनका पुत्रहरू" को थिए? ______________________‌
"प्रेमका प्रेरित" को थिए? _____________‌
कुन तीनजना चेलाहरू "भित्री समूह" का थिए? _____________‌
"येशूले प्रेम गर्नुभएको चेला" को थिए? _____________‌
यूहन्ना १:४३ मा हामी येशूले फिलिपलाई चेला हुन बोलाउनुभएको समयको बारेमा सिक्दछौँ। येशूले फिलिपलाई भेट्टाउनुभयो र भन्नुभयो, "मेरो ___________ ___________ (यूहन्ना १:४३)!" के फिलिपले त्यसो गरे होलान्? _____________‌। फिलिपलाई येशूले भेट्टाउनुभएको कुरो साँचो हो (यूहन्ना १:४३) तर फिलिपले पनि येशूलाई भेट्टाएका हुन्। यूहन्ना १:४५ मा फिलिपले भने, "हामीले उहाँलाई _________________ छौं।" फिलिप एक खोजी गर्ने व्यक्ति थिए! उनले मसीहको खोजी गर्दै थिए। के फिलिपले आफूले खोजेको कुरा भेट्टाए? ______________। परमेश्वरलाई खोज्नेहरूले परमेश्वरलाई भेट्टाउँछन् – "यदि उहाँलाई ______________ भने तिमीले उहाँलाई ______________" (१ इतिहास २८:९)। के तपाईं एक खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ? के तपाईं प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र परमेश्वरको रूपमा भेट्टाउन चाहनुहुन्छ?
पाठ १ - हामीले ख्रीष्टलाई भेट्टाउनु खाँचो छ; उहाँसित हाम्रो व्यक्तिगत भेट हुनु खाँचो छ।
पाठ २ - हामीले भेट्टाएको कुरा अरूसित बाँड्नुपर्छ।
फिलिप पवित्र शास्त्रहरूसँग राम्ररी परिचित थिए। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको कुरालाई उनले राम्ररी जान्दथे। यूहन्ना १:४५ मा उनले भने, "हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौँ, जसको विषयमा _____________‌ ले व्यवस्थामा लेखे, र _________________________‌ ले लेखे अर्थात् यूसुफका पुत्र, नासरतका येशूलाई।"
हामीले भेट्टाएको ख्रीष्ट बाइबलले नै उल्लेख गरेको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी हामीले निश्चय गर्नु जरूरी छ। कतिपय व्यक्तिहरू आफूहरूले ख्रीष्टलाई भेट्टायौँ भनी सोच्दछन् तर उनीहरूले भेट्टाएका ख्रीष्ट बाइबलका ख्रीष्ट होइनन्। त्यो त उनीहरूले आफ्नै कल्पनामा सृजेको ख्रीष्ट हो (जस्तै, भारत र नेपालमा आएर वेद र योगाको अध्ययन गरे भन्ने कथित "ख्रीष्ट")। मानिसहरूले चर्चा गरेका ख्रीष्ट बाइबलको ख्रीष्टसँग मेल खाँदैनन् भने उनीहरूले वास्तविक येशू ख्रीष्टलाई भेट्टाएका छैनन्।
उनले आफ्नो प्रभुमाथि कति थोरै विश्वास राखेका थिए भन्ने कुरा फिलिपको जवाफले देखाउँछ। फिलिपले यसो भन्नुपर्थ्यो: "प्रभु! यतिका धेरै मानिसलाई किनेर खाना खुवाउनु त हाम्रो लागि असम्भव छ। यदि तपाईं यी मानिसहरूलाई खुवाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले नै केही न केही गर्नुपर्छ। एउटा अलौकिक काम नै गरिनु आवश्यक छ। त्यसो गर्न हामी त सक्दैनौँ तर तपाईं सक्नुहुन्छ। तपाईंले विवाह भोजमा दाखरसको प्रबन्ध गर्न सक्नुभयो (यूहन्ना २) र तपाईंले रोगीहरूलाई निको पार्न सक्नुभयो (यूहन्ना ६:२)। यसैकारण यस विशाल जमातलाई खुवाउन पनि तपाईं सक्नुहुन्छ। यी मानिसहरूका भलाईका निम्ति जे आवश्यक छ त्यसको लागि म तपाईंमै भरोसा गर्नेछु।" प्रभुका निम्ति कुनै कुरा कठिन छैन भनी फिलिपले सिक्नु खाँचो थियो। अभावलाई पूरा गर्न प्रभुलाई कुनै समस्या छैन।
यो सुनेर फिलिपले भने, "प्रभु, ______________________________________, अनि यही हाम्रा निम्ति पर्याप्त हुन्छ" (यूहन्ना १४:८)। फिलिपको चाहना असल थियो। उनी पितालाई चिन्न चाहन्थे। उनी पितालाई देख्न चाहन्थे। तर फिलिपले एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न सकेका थिएनन्। येशू ख्रीष्टलाई वास्तविक रूपमा चिनेको व्यक्तिले कसलाई समेत चिनेको हुन्छ (यूहन्ना १४:७)? ______________। ख्रीष्टलाई देख्नेले _____________‌ पनि देखिसेको हुन्छ (यूहन्ना १४:९)! फिलिप पिता प्रकट गराइएको चाहन्थे तर पिता प्रकट गराइसकियो भन्ने कुरा फिलिपले बुझ्न सकेका थिएनन्! परमेश्वर पितालाई प्रकट गर्नुहुने र चिनाउनुहुने येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ!
आज पनि त्यस्ता मानिसहरू छन् जो थप प्रकाशको खोजी गरिरहेका छन्। परमेश्वरले आफूलाई तिनीहरूकहाँ विशेष-विशेष प्रकारले प्रकट गर्नुभएको र आफूलाई चिनाउनुभएको तिनीहरू चाहन्छन्। तिनीहरू विशेष दर्शन देख्न, विशेष सपना देख्न वा परमेश्वरबाट कुनै अन्य विशेष तरिकाले सन्देश प्राप्त गर्न चाहन्छन् (जस्तै, कथित "अन्य भाषा" मा बोलेर आदि)। आफूहरूसँग भएको प्रकाश नै पर्याप्त छ भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ! तिनीहरूको आवश्यकता भनेको केवल बाइबलको प्रकाश हो! परमेश्वरले आफूलाई खुलस्तै प्रकट गर्नुभएको छ। बाइबलद्धारा नै हामी येशू ख्रीष्टलाई चिन्दछौँ। येशू ख्रीष्टलाई चिनेर नै हामी परमेश्वर पितालाई चिन्दछौँ (यहन्ना १४:७)। हामीलाई नयाँ प्रकाशको खाँचो छैन, बरू हामीले परमेश्वरले हामीलाई दिइसक्नुभएको प्रकाशमा नै ध्यान दिनु खाँचो छ!
ऐतिहासिक परम्पराले बताए अनुसार, फिलिपले एशिया माइनर (हालको टर्की) मा सुसमाचार प्रचार गरे र आफ्नो अधिकांश समय सम्भवतः फ्रिगिया नाउँ गरेको क्षेत्रमा बिताए (बाइबलको मानचित्रमा हेर्नुहोस्)। युसेबियस् नामक प्राचीन इतिहासकारले उनलाई "एशियाका महान् ज्योति" को उपनाम दिएका छन्। फिलिपले नथनएललाई प्रभुमा ल्याए र निश्चय पनि उनले आफ्नो जीवनभरिमा अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याए ।
फिलिपको मृत्यु सम्बन्धी हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर उनी एक इसाई शहीदकै रूपमा मरे भन्ने हामीलाई प्रायः निश्चय छ। उनी "______________ सम्म विश्वासयोग्य" (प्रकाश २:१०) थिए!
यूहन्ना २१:२ र १४ मा बाइबलले नथनएल येशूका बाह्रचेला मध्येका एक थिए भन्ने सङ्केत दिएको जस्तै देखिन्छ। "नथनएल" भन्ने नाम बाह्र चेलाको कुनै पनि नामावलीमा नभेटिएकोले उक्त व्यक्तिको अर्को पनि नाम हुनपर्थ्यो भन्ने देखिन्छ। सबभन्दा मिल्न सक्ने नामचाहिँ बार्थोलोमाइ नै देखिन्छ।
नथनएल बाइबल जान्ने व्यक्ति थिए। पुरानो नियम शास्त्रको उनलाई राम्रो ज्ञान थियो। यसैकारण उनले भने, "के _____________बाट कुनै ______________ कुरा आउन सक्छ?" (यूहन्ना १:४६)। मसीह (इस्राएलका मुक्तिदाता तथा राजा) नासरत शहरबाट आउनेछन् भनेर लेखिएको कुनै पनि पुरानो-नियमको खण्ड उनी जान्दैनथे। शायद त्यसबेला उनले मीका ५:२ को महान् भविष्यवाणीलाई याद गर्दै थिए जसअनुसार इस्राएलका राजा बेथलेहेमबाट आउनुपर्थ्यो। तर "नासरतका येशू" उक्त भविष्यवाणी बमोजिम नै बेथलेहेमा जन्मनु भएको थियो भन्ने कुरा नथनएललाई थाहा भइसकेको थिएन!
नथनएलका शङ्काहरू आफ्नै ठाउँमा थिए तरै पनि उनी एक इमान्दार र खुल्ला विचारका मानिस भएकाले उनी आफ्नो नेभराको रूखलाई छाडेर फिलिपको पछि लागे। येशूले नथनएललाई भन्नुभएको सबभन्दा पहिलो कुरालाई टिप्पणी गरौं: "हेर साँच्चै एउटा इस्राएली, जसमा ______________ छैन" (यूहन्ना १:४७)। "छल" शब्दको अर्थ हुन्छ "कपट, धोका"। येशू यो भन्दैहुनुहुन्थ्यो, नथनएल एउटा छलकपट गर्ने व्यक्ति होइन। नथनएलको हृदय इमान्दार, निष्कपट र खुल्ला थियो। प्रतिज्ञा गरिएको मसीहको आगमनको बाटो हेरिरहने त्यस समयका यहूदीहरूमध्ये उनी एक थिए।
नथनएल यी शब्दहरू सुनेर छक्क परे। उनले सोधे, "तपाईंले मेरो बारेमा जम्मै कुरा कसरी जन्नुभयो" (दाँज्नुहोस्, यूहन्ना १:४८)? येशूले दिनुभएको जवाफ झनै छक्कलाग्दो थियोः "फिलिपले तिमीलाई बोलाउनुभन्दा पहिले, तिमी _____________को रूखमनि हुँदा नै मैले तिमीलाई _____________" (यूहन्ना १:४८)। येशूले नथनएललाई देख्नुभयो यद्यपि येशू त्यहाँ प्रत्यक्षरूपमा हुनुहुन्नथ्यो! उनी भर्खरै जहाँबाट आएका थिए त्यही ठाउँको दृश्य येशूले बयान गर्नुभएको सुनेर नथनएल तीनछक परे! फिलिपले नथनएलसँग बोल्नु अघि नै येशूलाई नथनएलको बारेमा जम्मै कुरा थाहा थियो! येशू वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनी नथनएललाई विश्वस्त तुल्याउन के यस कुरा नै पर्याप्त ठहरियो (हेर्नुहोस्, यूहन्ना १:४९)? _____________‌
उनको बारेमा बाइबलले अन्य थप कुरा नबताए तापनि यस कुरामा हामी निश्चित छौं, उनले जीवनको अन्तसम्मै येशू "परमेश्वरको _____________‌ र इस्राएलका ______________" हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रचार गरे (यूहन्ना १:४९)। उनले पनि शहीदको मुकुट पाउनेछन् (प्रकाश २:१०)!